Kim Jong-un walaashiis: Waa kuma ninka guursaday Kim Yo-jong? | warsanradio baydhabo
Dowladda federalka oo ku eedeysay qaar kamid ah...
Wafuud ka socota beesha caalamka oo Garowe kula...
Akhriso: Faalo uu Xasan Sheekh ka qoray is...
Midowga Musharaxiinta oo mar kale kulan ku yeeshay...
Banaan baxyo lagu taageerayo DF Itoobiya oo gilgilay...
Maxkamadda Ciidamada Oo Dil Toogasho Ah Ku Fulisay...
Home WARARKA MAANTA	Kim Jong-un walaashiis: Waa kuma ninka guursaday Kim Yo-jong?
Sannadihii ugu dambeeyay, Kim Yo-jong ayaa si wayn uga soo muuqatay saaxadda siyaasadda iyo hoggaanka caalamka waxayna noqotay shaqsi muhiim ah oo udub-dhexaadna u ah awoodda Pyongyang.
Waa da’da ka yar hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un – waxay dhalatay sannadkii 1987 – waana qofka kali ee ka midka ah walaalihiisa ee ay sida aadka ah isugu dhaw yihiin Kin Jong-un.
Waxaa dhowaanahan isa soo taraya wararka la xiriira in uu guursaday wiil uu dhalay nin xil sare ka haya maamulka Kuuriyada Waqooyi.
Yaa Guursaday muxuuse yahay ninkaas?
Waxaa jiro warar la isla dhexmarayo oo ah in uu gabadhan guursaday wiil uu dhalay nin lagu magacaabo Choe Ryong-hae, oo ah nin awood badan leh, xoghayana ka ah xisbiga talada haya ee dalkaas, waana ku xigeenka hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un.
Haddii guurkaas uu dhab yahay, waa arrin muhiim u ah maamulka dalkaas.
Qaar ka mid ah Khubarada Kuuriyada Koonfureed waxay sheegayaan in ninka gabadhan guursaday lagu magacaabo Choe Song, kaas oo ka tirsan hay’ad qarsoodi ah oo maamusha dhaqaalaha qoyska Kim.
In kastoo dhammaan macluumaadka ku saabsan Choe uu qariyay maamulka Kuuriyada Waqooyi, haddana tan iyo guurkoodii 2014-kii dhacay, waxaa la sheegayaa in laba canug ay isu dhaleen.
Sida uu qoray wargeyska the New York Times, Maalintii sannadka cusub ee 2015-kii, ayuu wargeyska rasmiga ah ee dalkaas ee Rodong Sinmun daabacay gabadhan oo xiran fargashiga guurka – iyadoo xilligaas booqaneysay meel lagu xanaaneeyo carruurta agoonta ah oo ku taalla Pyongyang.
Qof ay soo xigatay Wakaaladda Wararka ee Kuuriyada Koonfureed ee lagu magacaabo Yonhap wuxuu sheegay: “Inta aan ka warhayo Kim Yo-jong waxaa guursaday wiil uu dhalay Xoghayaha Xisbiga dalkaas maamula, Choe Ryong Hae.”
Image captionKim Jong-un iyo walaashii Kim Yo-jong
Mr Choe iyo Kim Yo-Jong waxaa loo maleynayaa in laba canug ay isu dhaleen – mid wuxuu dhashay 2015-kii, midka kalena 2018-kii, ayuu qoray wargeyska the Sun ee UK ka soo baxa.
Hadalka ku saabsan in canugga labaad uu u dhashay wuxuu soo baxay xilligii ay Kim Yo-jong booqatay ciyaarihii Xagaaga Olympic-gga ee sannadkii 2018-kii.
Gabadhan la dhalatay Hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi waxay wax ku soo baratay dalka Switzerland, waxayna ka baxday iskuulka uu soo dhammeeyay Kim Jong-un.
Waxay Kuuriyada Waqooyi dib ugu noqotay sannadkii 2000. Balse lama arag, lamana oga wixii ay qabaneysay tan iyo 2011-kii, xilligaas oo ay ka qeybgashay duugtii aabeheed Kim Jong-ill.
Markii ay saaxada siyaasadda ka soo muuqatay
Image captionKim Jong-un, Moon Jae-in iyo Kim Yo-jong
Awood intee la’eg ayey leedahay?
Maxaa sababay in qoyska Kim ay iska dhaxlaan xilka?
Ma loo baahan yahay in la helo qofkii xilka kala wareegi lahaa Kim Jong-un? Isku xirnaanta qoyska muhiim ayey u tahay.
Dacaayadda dalkaas iyo aragtida siyaasadeed, waxay in mudda ah xoojinayeen waxa ay ugu yeeraan Isku Dhiigga Paektu – taas oo dib ugu noqoneysa ninka aasaasay dowladnimada Kuuriyada Waqooyi, Kim Il-sung.
Waxaa la rumeysan yahay in Kim Jong-un ay u joogaan carruur, balse weli way da’yaryihiin.
Iyadoo taa la eegayo, haddana Kim waxay ka mid tahay qoyskaaas. Warbaahinta dalkaasna waa in ay eegaan sida ugu ee ay uga hadli karaan in awoodda gacanteeda la geliyo haddii Kin Jong-un uu meesha ka baxo.
Balse in Xididka qoyska ay ku abtirsato ma keeni kartaa in loo xusho Hoggaamiyaha xiga, suuragalse ma tahay in qof kale uu u arko hoggaamiye loolan kula jira?
“Haddii qof kale oo ka mid ah qoyska uusan awoodda sare ku soo biirin, dhankeeda wax kasta way u fudud yihiin,” sida uu sheegay Fyodor Tertitskiy, oo ka tirsan Jaamacadda Kookmin ee Seoul. “Waxaa dhici karta in hoggaamiyaha ugu sarreeya ay noqoto ama in ay waydo dhammaan xilalka iyo nolosheedaba.”
Kaalintey kaga qoyska maxay tahay?
Image captionKim Yo-yong
Kim Jong-un walaashiis: Waa kuma ninka guursaday Kim Yo-jong? was last modified: June 20th, 2020 by Admin
Sawiro:-Masuulin Katirsan KG Oo Kaqeyb Galey Xaflad Lagu Abaalmarinaayey Xafadihii Kugulaystey Tartan Aqoneedkii Idaacada Warsan Ay Qabatey
DHAGEYSO:Xisbiga Tiir oo Deeq bacooyin ah Gaar siiyey Dad Barakaciyaal ah .
Dowladda Somalia oo ka warbixisey xaaladihii u dambeeyey ee Coronavirus
DHEGYSO: WASIIRKA CADAALADA IYO GARSOORKA KGS OO XUDUR GAAREY